नेपालले भोली डच टिमसँग खेल्दै, विश्वकप छनोट अन्त्य सुखद गर्ने लक्ष्यमा नेपाल - Nepal Cricket
नेपालले भोली डच टिमसँग खेल्दै, विश्वकप छनोट अन्त्य सुखद गर्ने लक्ष्यमा नेपाल
Nepal's Paras Khadka defends during the ICC World Cricket League Championship in Amsteelveen, Netherlands, on Saturday, August 13, 2016. Courtesy: Eurosports
जारी आईसीसी विश्वकप छनोटको सातौं र आठौं स्थानका लागि शनिबार नेपाल र नेदरल्याण्ड्स आपसमा उत्रँदा दुई टोलीको अवस्था फरक छ । एकदिवशीय मान्यता पाएपछि नेपाली टाेली उत्साहित छ भने प्रतियोगितामा खराव लयमा रहेकाे नेदरल्याण्ड्स सुपर सिक्समा पुग्न नसकेपछि साताैं स्थानका लागि खेल्नुपरेकाे छ ।
नेपाल आफ्नो क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षणमध्येको एक हासिल गरेपछि निक्कै उत्साहित छ । बिहीबार पपुवा न्यूगिनीबिरुद्ध ६ विकेटको जित दर्ता गरेपछि नेदरल्याण्ड्सले हङकङलाई हराएसँथै नेपालले एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू मा अविश्मरणीय प्रदर्शन गरेलगत्तै विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा हासिल गरेको यस सफलताले नेपाली समर्थक र क्रिकेटर दुवै हर्षित छन् ।
नेदरल्याण्ड्सको हकमा, जसले गत वर्ष आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेसँगै टेष्ट राष्ट्रहरुपछि १३औं नम्बरमा ओडीआई स्टाटस पाएको थियो, विश्वकप छनोटमा उसको महत्वाकाँक्षा सातौं स्थानका लागि खेल्नेभन्दा धेरै नै माथि थियो । तर, विश्वकप छनोटको सातौं स्थानका लागि खेल्नुमै उसले गर्व गर्नुपर्ने अबस्था देखियो । पक्कै पनि उसका लागि यो निराशाजनक क्षण हो । तर, यो सबैको कारण उसकै खराव प्रदर्शन हो ।
The 118 runs partnership for fourth wicket between Paras Khadka and Sagar Pun against Netherlands. Photo: Rajesh KC/Cricnepal
यता नेदरल्याण्ड्स पनि राम्रो प्रदर्शनको खोजीमा हुनेछ । लामो साझेदारीको आवश्यकता नेदरल्याण्ड्सको लागि पनि छ । यस प्रतियोगितामा मात्र १ पटक नेदरल्याण्ड्सले १८० भन्दा बढी स्कोर गरेको छ । आफ्नो पछिल्लो खेलमा उसले हङकङबिरुद्ध कुनै समय १४५–३ को अवस्थामा रहेर पनि १७४ रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाएको थियो ।
नेदरल्याण्ड्सले हङकङबिरुद्ध यसै मैदानमा खेलेको थियो । नेपालले भने प्रतियोगिता अघिको वार्म अप खेल मात्र यस मैदानमा खेलेको थियो । बिहीबार यस पीचको अवस्था कडा र सुख्खा थियो । खेलाडीहरुले यसले स्लो र लो कण्डिसन भनेका थिए, जहाँ स्पिन आक्रमण प्रभावकारी देखिएको थियो ।